Martech စာရေးဆရာများ Martech Zone
၏စာရေးဆရာများ Martech zone ကုန်သွယ်ရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများစုစည်းထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၊ pay-per-click စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အရောင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ , ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အသံထွက်- ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်းမှ ဒေသခံစျေးကွက်သမားများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ
Jeff ၏ CEO အဖြစ် တာဝန်ယူသည်။ Jeengတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီ၊ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်သတင်းလွှာများကို တက်ကြွသောအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့် ငွေရှာရန် ကူညီပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကွန်ဖရင့်များတွင် မကြာခဏပြောလေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး CNN၊ CNBC နှင့် သတင်းနှင့် စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းများစွာတွင်လည်း ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။ Jeff သည် Harvard Business School မှ ထူးထူးခြားခြား MBA ရရှိပြီး Columbia University မှ Economics in Summa Cum Laude ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အီးမေးလ်စာရင်းသွင်းမှုများကို ဆွဲဆောင်ရန်၊ ထုတ်ဝေသူများသည် အကြောင်းအရာအလိုက် အကောင့်ဖွင့်မှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏ Personalization လုပ်နိုင်စွမ်းကို သက်သေပြရပါမည်။
Zara Ziad သည် ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် လေ့လာသူဖြစ်သည်။ ဒေတာ Ladder IT ၏နောက်ခံနှင့်အတူ။ သူမသည် ယနေ့အဖွဲ့အစည်းများစွာရင်ဆိုင်နေရသော လက်တွေ့ကမ္ဘာဒေတာသန့်ရှင်းရေးပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော အကြောင်းအရာဗျူဟာကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ သူသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များမှအစ သုံးစွဲသူအထိ၊ အမျိုးမျိုးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းများတွင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းစသည့် ကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်များအတွက် ပစ်မှတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရန် သူမကြိုးစားနေပါသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အဘယ်ကြောင့် Data Cleansing သည် အရေးကြီးပြီး Data သန့်ရှင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို သင်မည်ကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သနည်း။
Alexander သည် HypeAuditor တွင် CEO နှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ အဲလက်စ်သည်သူ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ industry အတွင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုတိုးတက်စေရန်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများစာရင်း ၅၀ တွင်အကြိမ်ကြိမ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဲလက်စ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဦး ဆောင်နေပြီးသြဇာသက်ရောက်သောစျေးကွက်ကိုမျှတစွာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် AI-based လိမ်လည်မှုကိုထောက်လှမ်းသည့်စနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ Influencer စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခင်းအကျင်း၏အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ6Artificial Intelligence (AI) ကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိရိယာများ ဥပမာများ
ဂျော့ခ်ျမှာ ဦး ဆောင်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် NetHunt CRM။ အရေးအသားသည်သူ၏အရာဖြစ်၏။ သူသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှအရောင်းမဟာဗျူဟာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဖုံးအုပ်ကာနည်းပညာနှင့် B2B စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ သူကဒေတာနှင့်ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာအကြားကွာဟချက်မီးတောက်နှင့်အတူတံတား။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ သဘောတူညီချက်ပြီးနောက်- ဖောက်သည်များအား အောင်မြင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ဆက်ဆံနည်း
Chief Marketing Officer အဖြစ် Ed Breault က တာဝန်ယူပါတယ်။ Aprimo များ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တိုးတက်မှု။ သူသည် အဖွဲ့အစည်း၏ B2B SaaS ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု အမျိုးအစားများနှင့်အတူ ရှေ့သို့ တွန်းအားပေးသည်။ သူသည် ကြီးထွားလာနေသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုကို အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကျယ်ပြန့်သောနောက်ခံနှင့် အသိပညာ၊ ကွဲပြားမှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့် အဆုံးစွန်သော ဝင်ငွေတို့ကို ဖန်တီးပေးသည့် အကောင့်အခြေပြု စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်များကို တီထွင်ဖန်တီးလိုသော စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ ဒစ်ဂျစ်တယ် ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန် CMOs အတွက် မော်ဂျူလာ အကြောင်းအရာ မဟာဗျူဟာများ
Prasanna သည် Express Analytics မှအကြီးတန်း SEO ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ SEO၊ Social Media၊ Blogging၊ Online Reputation Management၊ Google Ads နှင့် YouTube Video Optimization တို့တွင် အတွေ့အကြုံရှိသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းတို့၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်များကို အသုံးပြုနေပုံ
Paul Childs သည် ဝယ်လိုအား နှင့် ထောက်ပံ့ရေး ဘက်ခြမ်း နှစ်ခုစလုံးတွင် ပရိုဂရမ်စနစ်ကျသော နေရာ၌ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းကြော်ငြာ လုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကြီးထွားလာစေရန် အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ကျော်ရှိသော ကြော်ငြာနည်းပညာဝါရင့်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လည်ပတ်မှု၊ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုစသည့် VP နှင့် C အဆင့်များတွင် အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်ရာထူးများစွာကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Paul သည် 2008 ခုနှစ်တွင် Adfonic ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထိပ်တန်းမိုဘိုင်း DSP များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက၊ Paul သည် Smadex ရှိ အခွန်ရုံးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Entravision သို့ လုပ်ငန်းကို ကြီးထွားစေပြီး လုပ်ငန်းမှထွက်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ Paul သည် လက်ရှိတွင် VP Business Development တွင် ရှိနေသည်။ MOLOCO.
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ Sizzle သို့ပြန်သွားရန်- E-Commerce စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ပြန်လာမှုအများဆုံးရရှိရန် Creative ကိုအသုံးပြုပုံ
Vaibhav သည်တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ စမတ်စာရေးဆရာ. ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကို တည်ဆောက်ဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်ဦးဆောင်လမ်းပြ တိုးတက်မှုကနေ Start Ups ကို ချဉ်းကပ်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ Backlinks များကိုအလွယ်တကူရယူရန်နှင့် AI ကိုအသုံးပြု၍ Google တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်လမ်းညွှန်
အကြီးအကဲ Admitad ConvertSocial. Ksana သည် Affiliate Marketing ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကွန်ဖရင့်များတွင် ဟောပြောသူဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်လုပ်ငန်းတွင် ပါ၀င်သော Admitad ConvertSocial ၏ ဖောက်သည် 35,000 ကျော်နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိပြီး ၎င်းသည် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများ၏ကမ္ဘာ၏ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို အမြဲသတိပြုမိစေပါသည်။ Admitad အဖွဲ့သို့မ၀င်မီ၊ Ksana သည် ပူးပေါင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းတွင်7နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုများ၏ metasearch တွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်များကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အောင်မြင်သော Affiliate Marketers များသည် ၎င်းတို့ မြှင့်တင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဆီသို့ ဝင်ငွေကို တွန်းအားပေးရန် အသုံးပြုသည့် ဗျူဟာ7ခု
Val Kelmuts သည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ Staylimeကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Redwood City တွင် ရုံးစိုက်သော အီလက်ထရွန်းနစ် ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ။ သူသည် စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ရှိသည်။ Val သည် Adobe Commerce အရောင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်သူ၊ Shopify လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်သူနှင့် PMI အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ Adobe Commerce (Magento) တွင် စျေးဝယ်လှည်းစည်းကမ်းများ ဖန်တီးခြင်း အမြန်လမ်းညွှန်
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ သင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေ (ROI) တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်6ခု
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ Google Web Stories- အပြည့်အဝ နစ်မြုပ်နေသော အတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်ရန် လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန်ချက်
Kyle သည် software developer နှင့် co-founder တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု၊ သြဇာလွှမ်းမိုးသူများကို ရှာဖွေငှားရမ်းရန် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ B2B Marketing အတွက် TikTok အသုံးပြုနည်း
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cloud- MobileConnect သို့ SMS အဆက်အသွယ်များကို တင်သွင်းရန် Automation Studio တွင် အလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးနည်း
မီဒီယာနှင့် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုတွင် အတွေ့အကြုံ 25 နှစ်ကျော်ဖြင့်၊ Paul Brenner သည် Emmis Operating Company နှင့် ဌာနခွဲဥက္ကဌအပါအဝင် c-suite အများအပြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ NextRadio/TagStation ၏ဥက္ကဌအနေဖြင့်၊ ၎င်း၏အလုပ်သည် ပရိသတ်တိုင်းတာခြင်းအတွက် စမတ်ဖုန်းအားလုံးရှိ FM Chip လုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကားတွင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကို မြှင့်တင်ပေးကာ အသံလွှင့်ရေဒီယိုအားလုံးအတွက် ဒေတာထည့်သွင်းခြင်းပလပ်ဖောင်းများကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် Paul နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Vibenomics ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံးသော စျေးကွက်တွင်း Audio Out-of-Home™ ကြော်ငြာဖြေရှင်းချက်အတွက် စျေးကွက်သို့သွားသော စျေးကွက်ဗျူဟာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီရန် မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ်အဖြစ်။ အောင်မြင်စွာ လွှင့်တင်ပြီးနောက်၊ Brenner အား ဝင်ငွေရှာသည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဝန်းကျင်ရှိ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအားလုံးကို ကြီးကြပ်ရန် Audio OOH ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီး မကြာသေးမီက DPAA သုတေသနကော်မတီနှင့် IAB လက်လီမီဒီယာကော်မတီအသစ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ အိမ်အပြင်သို့ အသံ (AOOH) သည် ပြင်ပကုမ္ပဏီကွတ်ကီးမှ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အဘယ်ကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်သနည်း
Samir Sampat သည် Marketing နှင့် Events တွဲဖက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Smith.ai. Smith.ai ၏ 24/7 virtual ဧည့်ခံသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ချတ်အေးဂျင့်များသည် ဖုန်း၊ ဝဘ်ဆိုက်ချတ်၊ စာတိုများနှင့် Facebook တို့မှ ဦးဆောင်မှုများကို ဖမ်းယူပြောင်းလဲပေးပါသည်။ Smith.ai ကို Twitter၊ Facebook၊ LinkedIn နှင့် YouTube တွင် သင် Follow လုပ်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ မင်းရဲ့ဦးဆောင်လမ်းပြတွေကို မပိတ်ဘဲ အရောင်းမှာ ဇွဲရှိရှိဘယ်လိုနေမလဲ။
အိုင်ဗန် ဘိုင်ဒင်က နောက်မှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ခရီးသွား ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည်။ မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းနှင့် developer များအတွက် ပစ်မှတ်များသတ်မှတ်ခြင်းအပြင် Ivan သည် မိတ်ဖက်အသစ်များနှင့် ကြော်ငြာသူများကို ကွန်ရက်သို့ ဆွဲဆောင်ပါသည်။ သူသည် ပြောင်းလဲနှုန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အိုင်ဗန်အား စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ Forbes နှင့် အခြားနာမည်ကြီးမီဒီယာများစွာတွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကြော်ငြာအတွက် ပုံစံသုံးမျိုး- CPA၊ PPC နှင့် CPM
နီကိုလပ်စ်အန်တိုနီယိုဂျင်နီနက်သည် Widen Enterprises ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ သတင်းစာပညာ၊ အကျိုးအမြတ်မယူသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ဒီမိုကရေစီမြှင့်တင်ရေးတို့တွင်နောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) ပလပ်ဖောင်းဆိုတာဘာလဲ။